watchOS 4.2 inosvika zviri pamutemo kune wese munhu ane ruzivo rweApple Pay Cash | Ndinobva mac
watchOS 4.2 inosvika zviri pamutemo kune wese munhu ane hunyanzvi hweApple Pay Cash
Iyo yazvino vhezheni yakaburitswa neApple yeiyo watchOS inoshanda sisitimu, Iyo vhezheni 4.2. Ino nguva inobatana neiyo tvOS 11.2 vhezheni yakatangwa maawa mashoma zvisati zvaitika uye zvakare kuvhurwa kweiyo iOS 11.2 vhezheni, saka isu tinongoda vedu vadiwa macOS High Sierra kuti ivhurwe zviri pamutemo.
Mune ino kesi nhau dzeWatchOS 4.2 dziri kushomeka uye Apple inowedzera sekuchinja kukuru mukana wekushandisa Apple Bhadhara Cash pane chigadzirwa chemaoko. Zviripachena kuti zvimwe zvigadziridzo zvinowedzerwa pakuchengeteka uye kugadzikana kwesystem neyakajairika bug fixes zvichingodaro.
mawatchOS 4.2 anowanikwa kune wese munhu
Uye ichokwadi kuti kunyangwe chiri chokwadi kuti hutsva hukuru hweshanduro iyi yazvino mukana wekushandisa Apple Kubhadhara Cash, Apple yave nenguva yakadzora mashandisiro ayo kupfuura kweUnited States (sekune iOS) asi zvakare inowedzera gadziriso uye kumwe kugadzirisa senge kuenderana neK HomeKit inosasa uye mapombi muImba app, inogadzirisa dambudziko rezvisingatarisirwi reboots paunenge uchibvunza Siri nezve mamiriro ekunze, inowedzera rutsigiro rwemhando nyowani yekudzidziswa kubva kune wechitatu-bato maapplication kurekodha madaro, avhareji kumhanya, akateedzana uye kusaenzana On Apple Watch Series 3, gadzirisa nyaya neiyo yemoyo app uye wobva wawedzera gadziriso kuti iwe ugone kurova akawanda maalarm uye nguva.
NaApple Pat Cash vashandisi vanogona kubhadhara kuburikidza neyekuzvarwa Meseji kunyorera uye idzi kubhadhara kunoitwa pakati peApple vashandisi. Izvo ndezvevaya vasingatinzwisise, iyo Apple Wizum. Iye zvino tinofanirwa kumirira ichi chitsva kuti chiwedzerwe munyika dzese uye kwenguva iyo zvinoita sekunge ichaenda kure. Rangarira kuti kugadzirisa iyo Apple Watch inofanirwa kunge iri pa50% kubhadharisa uye muzasi, iyo vhezheni itsva inoita kunge yatovepo kubva kunyorera Tarisa> General> Software kugadzirisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » watchOS 4.2 inosvika zviri pamutemo kune wese munhu ane hunyanzvi hweApple Pay Cash
Amazon inosimbisa zviri pamutemo kuti ichavhura iyo Prime Vhidhiyo app yeApple TV pamberi pa2018
Apple inowedzera huwandu hwemabhandi mavara anowanikwa kuApple Watch